Safarka madaxda maamulka Jubaland waxaa ku weheliya siyasiyiin iyo waxgarad kale oo ka yimid dalka Kenya iyo gobolada DDS Itoobiya kuwaas oo dadaal ugu jira sidii ay u qaboojin lahaayeen xiisadii kacsan oo ka dhalatey weerarkii dowlada Federaalka ku qaadey maamulka fadhigiisu yahay Jigjiga.
Wafdigaan ayaa sida wararka lagu helayo Kulamo la qaateen RW Itoobiya iyo saraakiisha ciidamada dalkaas iyagoo wada-hadal kala leh sidii loo dajin lahaa ciidamo daacad u ah Madaxweynihii maamulkaas Cabdi Ileey kuwaas oo ay is horfadhiyaan Militariga wadankaas.
Dhinaca kale kulamdaan ayaa dirada saaraya mustaqbalka Madaxweynihii maamulkaas kasoo ku jira gacanta dowlada Federaalka ah ee Itoobiya.
Cabdi Ileey oo xilka wareejiyey ayaa waxaa si uusan raali ka aheyd ciidamada Militariga khasab uga kexeeyeen halka uu ka dagan yahay magalada Jigjiga waxayna u gudbiyeen Addis Ababa talaabadaas oo ka careysiisey tageerayaashiisa.
RW Itoobiya Abiy Axmad oo balan qaadey markii xilka uu la wareeegey fur-furaansho siyaasadeed ayaa qaatey go’aamo Khatar galin kara isbadaladii uu damacsanaa inuu ku sameeyo arimaha dhaqaalaha iyo xoriyada fikirka dadka ku nool wadanka labaad ee ugu dadka badan Afrika.
Waxaa weli aan xal laga gaarin dagaalada u dhexeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Oramada kuwaas oo Dad badan ku dhinteen kuwo kalena ku barakaceen.